Jiri zighachi akwụkwọ nnọchianya na Chromium / Chrome | Site na Linux
chromium dị ka ihe nchọgharị ọ bụla nke na-asọpụrụ onwe ya, ị nwere ike iji Proxy usoro ọ bụrụ na anyị ga-eji otu mee njem.
Nsogbu na-abịa mgbe anyị jiri ya na desktọọpụ gburugburu dị ka Lxde o Xfce, ndị na-enweghị nhọrọ iji a Proxy zuru ụwa ọnụ. Ojiji nke Onye nnọchiteanya en chromium ọ dị mfe dịka itinye ọdụ:
Ma ọ ga-abụ ihe na-agwụ ike ịme nke a oge ọ bụla anyị banyere n'ụgbọ mmiri. Ya mere, ozugbo ihe ngwọta bụ dezie faịlụ: /usr/share/applications/chromium.desktop. Anyị na-ele anya na akara nke na-ekwu, sị:
Anyị na-eji dochie ya:
Nke ahụ ezuola. Anyị nwekwara ike iji Sock Proxy ọ bụrụ na anyị ejiri akara:
Nwere ike ịnweta ọtụtụ ozi ndị ọzọ na weebụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Jiri proxy na Chromium / Chrome
Nke a ọ gaghị adị mfe?:
Enweghị echiche, nke mbụ n'ihi na enweghị m ohere, na nke abụọ n'ihi na ọ dị m ka anyị na-ekwu maka ihe dị iche iche.
Ọ bụ saịtị ebe ị nwetara ọtụtụ weebụsaịtị, ị nwere ike ịkekọrịta ha n'agbanyeghị ịchọrọ, site na mba, ngalaba, wdg.
Clickpịrị na mmezigharị weebụ wee ziga gị na ibe ọzọ nke ị ga-enweta ụlọ mmanya dịka nke injin nyocha, ebe ahụ ị banyere adreesị weebụ ma ị nọworị na onye nnọchiteanya
Echere m, anyị anaghị ekwu banyere otu ihe ahụ. Ka m kọwaa, ọ bụrụ na anaghị m eji proxy, enweghị m ike ịnyagharịa. Ndị ọchụnta ego na-eji ya eme ihe otutu, ụfọdụ anaghị ama aha ha, mana ha na-eji ya. Ọ bụrụ na anaghị m ezipụta a zighachi akwụkwọ nnọchiteanya (m na authenticates megide m ISP si) Enweghị m ike ịnweta ịntanetị. Yabụ, ọ bụrụ na m nwere ohere, ọ bụrụ na anaghị m etinye akwụkwọ nnọchiteanya, enweghị m ike ịbanye na saịtị ị na-ekwu maka ya.
Ah, ya mere ndị ị na-eji abụghị ihe echekwa aha
Mba, mba obula .. Ana m ekwu ihe banyere Proxy Cache, not Anonymous Proxies .. 😀
ezigbo data, ihe mere m na-agbanwe proxy sava, nke a dị mma
Zaghachi Guido Rolon
Daalụ, o nyeere m aka, ọkachasị n'ihi na achọrọ m iji ya sọks5 si Mahadum m na-eme ọwara n'ụlọ m.
Zaghachi na heaynetol
Aga m anwale ya, mana ọ ga-aga!
Enwere m mmasị na Manjaro Linux, ọ na-ewute m na bandwit m dị oke egwu (64 k / s) mana njikọ na-erughị 1k / s
ma á »bá» case rá »you na á» ‹chá» rá »tinye a zá» zighachi zighachi ndòchi niile maka adreesị obodo
kedu ka ihe ga-adị?
Zaghachi Dasht Alejandro Sandín Vargas
Ofu nsogbu na proxy wezụga
Lee ihe (ihe ngwọta)
na njedebe nke akara a (omenala)
chromium-browser –proxy-server = »http: // nkesa: 1080 ″
add –no-proxy-server = »proxy wezụga»
ọ ga-adị ka nke a
chromium-nchọgharị% U –proxy-server = »http: // proxy: port» –no-proxy-server = localhost, *. domain.cu
bụrụ na ọ chọrọ Onye ọrụ na Ngafe ọ ga - abụ
chromium-browser% U –proxy-server = »http: // aha njirimara: password @ proxy: port» –no-proxy-server = localhost, *. domain.cu
Ihe nkuzi iji hazie ebe nchekwa proxy ma ọ bụ oghere vpn bara ezigbo uru.
Ọ bụrụ na anyị jikọtara ya na iji nzuzo nzuzo zoro ezo anyị ga-enwe nchebe karị, ụbọchị ọ bụla anyị ga-akawanye njọ ilekọta nzuzo na netwọkụ.
Zaghachi na ProxySEO
Eduzi ka idozi Linux Mint LXDE